Deutsch (German)EnglishFrançais (French)Español (Spanish)العربية (Arabic)Română (Romanian)Русский (Russian)Türkçe (Turkish)فارسی (Persian)Tiếng Việt (Vietnamese)TigrinyaLeichte Sprache (Luqad Fudud)
Adiga ama xubin qoyskaaga, saaxibadaada ama asxaabtaada ka mid ah bartilmaameed ma u noqoteen xisbiyada xaqjir ah, cunsuriyadda ama rabshadaha naceybka Yuhuudda? Miyaad aragtay weerar ama waxyeelayn ama ma tahay qof aan garanayn waxa xiga ee la sameeyo?
Waan ku caawinaynaa! NALA SOO XIRIIR Nala soo xiriir Ma ka warqabtaa weerar ay samayn rabaan xisbiyada xaqjir ah, kuwo cunsuriyadda ama rabshadaha naceybka Yuhuudda?
Naga caawi inaan diiwaangelino dhacdada. KA WARBIXI DHACDADA Ka warbixi dhacdada
Adeegga La-talinta Niedersachsen ee loogu talagalay dadka ay dhibaatadu saameysey ayaa ah meesha ay nagala soo xiriir karaan kuwa ay samayn ka soo gaartay rabshadaha xisbiyada xaqjir ah, kuwo cunsuriyadda ama rabshadaha naceybka Yuhuudda ee ka dhacay Niedersachsen. Kooxdayadu waxay u qaybsan yihiin saddex xafiis oo ku kala yaala gobolo (Woqooyiga Galbeed, Woqooyiga-bari iyo Koonfurta Niedersachsen) waxayna la taliyaan dadka ay dhibaatadu soo gaadhay, ehelka iyo markhaatiyaasha weerarada iyo waxyeelooyinka.
Taladeenu way kala duwan tahay waxayna kuxirantahay baahida kuwa saameynta soo gaartay. Waxaan kuwa talo doonka ah ku wehlinaa dhamaan talaabooyinka, sida falanqaynta shucuureed ee fal dambiyeedka, gudbinta cabashooyinka ama macluumaadka ku saabsan lacag bixinta magdhowga ah, haddii taas ay tahay waxa uu doonayo qofka ay khusayso. Taladeenu waa mid ikhtiyaari ah, qarsoodi ah oo bilaash ah.
Weerarrada xisbiyada xaqjirka ah, kuwo cunsuriyadda ama rabshadaha naceybka Yuhuudda maaha wax aan caadi ahayn. Laakiin si aad u yar ayaa looga hadlaa. Waxaan dooneynaa inaan rabshadaha xisbiyada xaqjirka ah, kuwo cunsuriyadda ama rabshadaha naceybka Yuhuudda ka dhigno kuwo muuqda si aan uga hortagno una yareyno mustaqbalka fog.